प्रेम विवाह गरेको श्रीमतीको मृत्यु भएको २५ दिन पछि श्रीमानले लाशलाई चिहानबाट निकालेर जे गरे कारण देख्दा सबै आश्चर्य चकित ! | समाचार
October 27, 2021 NepstokLeaveaComment on प्रेम विवाह गरेको श्रीमतीको मृत्यु भएको २५ दिन पछि श्रीमानले लाशलाई चिहानबाट निकालेर जे गरे कारण देख्दा सबै आश्चर्य चकित !
अब उत्तर प्रदेशको मेरठको यो दुखद प्रेम विवाह हेर्नुहोस् । थाना लिसादी गेट क्षेत्रको करीम नगर इलाकामा बस्ने फरमानलाई साइनाको प्रेम भयो। दुबैको फोन कुराकानी यति धेरै भयो कि उनीहरूले विवाह गर्ने निर्णय गरे।
यद्यपि साइनाको परिवार यस विवाह बाट खुसी थिएनन्। तिनीहरू साइनाको परीवार विवाह गरेको चाहँदैन’थे। तर जब दुई हृदयले एक अर्कालाई साँच्चि कै प्रेम गर्दछन् भने संसारले तिनीहरूलाई कहाँ रोक्न सक्दछ।
फरमान र साइनाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भयो। दुबै परिवारको इच्छा विपरीत गए र १७ मे मा विवाह गरे। उसको परिवारका सदस्यहरू यो विवाहमा उपस्थित थीयनन। तर दुबैले विवाह गरी धेरै खुसी थिए।
विवाह पछि सबै ठीकठाक थियो। साइना र फरमान एकै घरमा खुशीसाथ बस्दै थिए। तर एक दिन सायना आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न गइन्। केही समय पछि, ३१ मेमा, उनि आफ्नै घरमा शं’का’स्पद तरिकाले मृ’त अ’बस्थामा भेटीईन ।
साइनाका परिवारका सदस्यहरूले भने कि उनकी छोरी बिरामी परेकी थिइन उनको स्वास्थ्य राम्रो थिएन त्यसैले उनले अकालमै ज्यान गुमाईन । तब फरमानले यो कुरा स्वीकारे र आफ्नी पत्नीलाई परिवारका सदस्यहरू’सँगै गा’डे।
आफ्नी श्रीमतीको मृ,त्यु पछि फरमान साह्रै दु: खी थिए। उसले बुझ्न सकेन कि माएती उसलाई यो के गर्यो। उसको गल्ती के थियो? त्यसपछि उनलाई थाहा भयो वा शंका लाग्यो कि ऊ आफ्नी पत्नीको मृ,त्युको बदला लिन कटिबद्ध भयो।
सायनाको ,मृ,त्यु भएको २५ दिन पछि उनी पुलिस स्टेशन गए र साइनाका परिवारका सदस्यहरूले उनलाई मा’र्ने कुरा प्रहरीमा गुनासो गरे। फरमानले आरोप लगाए कि सायनाका परिवारका सदस्यहरू हाम्रो विवाहमा खुसी थीयनन। उहाँ हाम्रो प्रेम विवाह मन पराउनुहुन्न थीयो। त्यसैले उनले साइनाको ह’ त्या ग’ रे तर अहिले बिरामीले गर्दा मृ,त्यु भएको हो भनेर भनिरहेछ।
यसै बीच केससँग सम्बन्धित अडियो पनि भाइरल भइरहेको छ। यसमा सासु र जोइ बीच एक श a्का कुराकानी सुन्न सकिन्छ। छ फर्मन यस अडियो कलमा भन्छ कि उनकी श्रीमतीका हत्यारहरु’लाई स,जाय दिइसके पछि मात्र उनी मर्नेछन्।
फरमानको गुनासो पछि, पुलिस पनि हरकतमा आयो। उनले investigate दिन अगाडि सायनाको ला,स भेट्टाए र उनलाई अनुसन्धान गर्न चि’हा’न’बाट बाहिर निकाल्यो। शरीर पोस्ट,मार्टम जाँचको लागि पठाइएको छ। यस केसको बारेमा थप विवरण रिपोर्ट आए पछि मात्र खुलासा हुनेछ।
मध्यरातमा श्रीमानसँग झगडा भएपछि राप्ती नदीमा हा’म फा’लि’न दीपाले
October 26, 2021 Nepstok